VaLovemore Moyo Vokwikwidzana naVaSimon Khaya Moyo Chinzvimbo cheMutauriri weParamende
Kurume 24, 2011
Nhengo dzedare reparamende muZanu PF dzinonzi dzakasangana neChipiri nekomiti yebato iri yepamusoro soro, yePolitburo, dzikaudzwa nezvechisungo chekutsigira VaKhaya Moyo semutauriri weparamende chakanga chaitwa nekomiti yeZanu PF yepamusoro soro iyi.
Zvinonzi pakambenge paita makakatanwa muZanu PF, vamwe vachitsigira mukokeri weZanu PF muparamende, VaJoram Gumbo, vamwe vachitsigira Muzvare Oppah Muchinguri, kutora chinzvimbo chakonzeresa mutauro muparamende.
Bato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai rakazivisawo kare kuti richamirirwa nevaive mutauriri weparamende, VaLovemore Moyo, avo vakazobviswa pachigaro nedare reSupreme Court richiti havana kusarudzwa zvakachena.
Sarudzo dzekutsvaga mutauriri weparamende dzaitarisirwa kuitwa neChipiri, asi munyori wedare reparamende, VaAustin Zvoma, vakaendesa mberi kuvhurwa kwedare iri kuzuva rechiziviswa.
Izvi zvakazoita kuti MDC yaVaTsvangirai neChitatu ikwire kudare reHigh Court ichida kuti dare rimanikidze VaZvoma kuvhura paramende.
Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti kunyange hazvo VaTsvangirai vakaudza VaZvoma kuti ivo VaTsvangirai vainge vawirirana nemutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, kuti dare reparamende rivhurwe neChipiri svondo rinouya, pamutemo, VaMugabe havasati vashambadza chinzvimbo chemutauriri weparamende.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuna VaZvoma kana pane chati chaitwa naVaMugabe sezvinodiwa nemutemo.
Mukokeri weMDC T mudare reparamende, VaInnocent Gonese, vanoti bato ravo rinenge riine nhengo makumi mapfumbamwe nesere dzichavhota, idzo dzinosanganisirawo VaTsvangirai, ukuwo Zanu PF ichinzi inenge iine nhengo makumi mapfumbamwe nenomwe, kusanganisira Muzvare Muchinguri, avo vanofanirwa kutanga vagadzwa senhengo yeparamende, vari ex-officio ine kodzero dzekuvhota.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube, VaEdwin Mushoriwa, vanoti bato ravo harisi kuzoshanduka padanho rarakatora rekuti harisi kuzopinda musarudzo idzi.
Mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vaudzawo bepanhau reThe Herald kuti bato ravo rakaita musangano wePolitiburo wekudoma VaKhaya Moyo semunhu achamirira bato ravo musarudzo.
VaGumbo vatiwo chakaita kuti vasarudze VaKhaya Moyo ndechekuti munhu ane ruzivo rwakanyanya senhengo yeparamende uye vakambove mumiriri weZimbabwe kune dzimwe nyika.
Zanu PF ine nhoroondo yekumanikidza nhengo dzayo kutsigira munhu anenge achidiwa nePolitiburo pazvinzvimbo. Hatina kukwanisa kubata VaGumbo kuti tinzwe zvihinji.
Vane ruzivo nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti hapana kunyatsowirirana pakuti anovhota ndiyani, izvo zvava kupa kuti vakawanda vati nyaya iyi ichatogadziriswa chete nematare edzimhosva.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari muntungamiri weFederation of Non-Governmental Organizations, uye vari mutsigiri weZanu PF, VaGoodson Nguni, vanoti Zanu PF ichahwina pasarudzo iyi.
Ukuwo imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaCharles Mangongera, vanoti havaone Zanu PF ichibudirira.
Hurukuro naVaGoodson Nguni pamwe naVaCharles Mangongera